गुलाबको नाम: उम्बर्टो इकोको मास्टरपिस | वर्तमान साहित्य
गुलाबको नाम (१ 1980 .०) त्यो काम हो जसले इटालेली उम्बर्टो इकोलाई साहित्यिक सफलताको हनीको स्वाद लिन प्रेरित गर्दछ। र यो कमको लागि होइन, आज, यो कामले 50 करोड भन्दा धेरै प्रतिहरू बिक्रि गर्‍यो। यो रहस्यको गहिरो र with्गको साथ एक ऐतिहासिक उपन्यास हो जसको षड्यन्त्र चौधौं शताब्दीको दौडान इटालियन गुम्बामा भएको एक रहस्यमय अपराधहरूको श्रृंखलाको अनुसन्धानको वरिपरि घुम्छ।
जनतासामु जारी भएको केही समयपछि, पाठले दुई महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू प्राप्त गर्‍यो: पुरस्कार बोक्सी (1981 XNUMX२।) र मेडिसी एलियन (1982)। पाँच बर्ष पछि - र कामले गर्दा प्रभावित प्रभाव बाट सारियो - इको प्रकाशित: Apostille to गुलाबको नाम (१ 1985 XNUMX) यस कामको साथ, लेखकले आफ्नो उपन्यासमा उठेका केही प्रश्नहरूको उत्तर दिन खोजे तर यसमा भएका ईन्गमासलाई प्रकट नगरी।
1 गुलाबको नामको सार
2 गुलाबको नामको विश्लेषण
2.2 मुख्य पात्रहरु
2.2.1 बास्कर्भिलेको विलियम
2.2.2 मेलकको एड्सो
2.2.3 जर्ज डि बुर्गोस
2.2.4 ऐतिहासिक अभिनेताहरू
2.3 उपन्यास अनुकूलन
2.4 जिज्ञासु तथ्य
3 लेखकको बारेमा, उम्बर्टो इको
3.1 अध्ययन र पहिलो काम अनुभव
3.2 साहित्यिक दौड
3.4 लेखकका उपन्यासहरू
को सार गुलाबको नाम
१1327२XNUMX को जाडोमा, फ्रान्सिसकन गुइलर्मो डे बास्कर्भिले साथ यात्रा गर्दछ उनको चेला काउन्सिलको लागि मेलको एडसो। गन्तव्य: उत्तरी इटालीमा एक बेनेडिक्टिन मठ। त्यहाँ पुग्दा तिनीहरू भिक्षुहरू र पोप जोन XXII का प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउँछन्। उद्देश्य: भ्रष्टाचारका मुद्दामा छलफल गर्नुहोस् (heresies) यसले गरीबीको एस्टेटोलिक भाकललाई दाग दिन्छ र त्यो - कथित - तिनीहरू फ्रान्सिस्कन्सको समूहबाट चालित छन्।
बैठक एक सफल हुन को लागी, तर चित्रकार Adelmo da Otranto को अचानक र रहस्यमय मृत्युले वातावरण बादल छायो। उक्त व्यक्ति एबे लाइब्रेरीको फ्लोरमा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो - किताबहरू भरिएका किताबखानहरूको भव्य भूल - एडिफियम अष्टकोनको माथिबाट गिरेपछि। तथ्य उठे पछि, एबोन Theआबादको मन्दिर— गुइलेर्मोलाई यसको बारेमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दछ यो एक हत्या हो भनेर शंका गर्नुहोस्.
सोधपुछ अन्तिम सात दिन। त्यो अवधिमा, धेरै भिक्षुहरू मरे देखिन्छन्, सबै त्यहि परिस्थितिमा: तिनीहरूको औंला र जिब्रो कालो मसीमा दागले। स्पष्टतया, मृत्यु अरस्तुको पुस्तकसँग सम्बन्धित छ जसका पातहरू जानाजानी विष दिइयो। उनको अनुसन्धानको क्रममा, गुइलर्मो केवल बहुविध ईन्ग्मामा मात्र आउँदैन, बितेको अन्धा धर्मगुण जोर्गे डि बर्गोसको छविमा बुढ्यौली र बुद्धिका पर्दाको अन्तर्गत एकदम राम्रोसँग नक्कल गरिएको, अवतारको दुष्टको साथ आमने सामने हुनेछ।
गुलाब को नाम ...
विश्लेषण गुलाबको नाम
गुलाबको नाम एक ऐतिहासिक रहस्य उपन्यास हो जुन सन् १1327२। मा लिइएको हो। प्लाट उत्तरी इटालीमा अवस्थित बेनेडिक्टिन मठमा हुने गर्दछ। कथा7अध्यायहरूमा उल्टिन्छर यी प्रत्येक मध्ये एक दिन गुइलर्मो र नौसिखिया एड्सोको अनुसन्धान भित्र छन्। उत्तरार्द्ध, खैर, पहिलो व्यक्तिमा मिथ्याको विकास वर्णन गर्ने एक हो।
अंग्रेजी मूल को, उहाँ फ्रान्सिस्कनका एक जना अगुवा हुनुहुन्थ्यो जसले एकपटक इन्क्विजेशनको दरबारको पुजारीको रूपमा सेवा गरेका थिए। उहाँ कुशल, अवलोकनकर्ता र बौद्धिक मानिस हुनुहुन्छ, धेरै जासूस कौशलहरू सहित। ऊ अबीमा भिक्षुहरूको रहस्यमय र अचानक मृत्युलाई सुल्झाउने काममा हुनेछ।
यसको नाम गुइलर्मो डे ओकहमबाट आएको हो, एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व जसलाई इकोले शुरूदेखि नै नायकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सोचाइ राख्यो। जे होस्, धेरै आलोचकहरू भन्छन कि बास्कर्भिले खोजी अनुसन्धान व्यक्तित्वको हिस्सा आइकोनिक शेरलॉक होम्सबाट आएको हो।
महान मूलको - ब्यारन डि मेलकको छोरा, कथाको कथनकर्ता हो। उसको परिवारको आदेशले, विलियम डे बास्करेभिललाई कमाण्डमा एक लेखक र चेलाको रूपमा राखिएको छ। फलस्वरूप, उनी अनुसन्धानको क्रममा सहयोग गर्दछन्। षड्यन्त्रको विकासको क्रममा उनले आफ्ना अनुभवहरू बेनेडिक्टिन नौसिखियाका रूपमा र गिलर्मो डे बास्कर्भिलेसँगको आफ्नो यात्रामा बिताएको कुरा बताउँछन्।
जर्ज डि बुर्गोस
उहाँ स्पेनी मूलका पुरानो भिक्षु हुनुहुन्छ जसको उपस्थिति प्लटको विकासमा महत्वपूर्ण छ।। आफ्नो शरीरविज्ञानबाट, इकोले आफ्नो छालाको फुस्रोपन र अन्धोपनलाई हाइलाइट गर्दछ। उनको भूमिकाको बारेमा, चरित्रले मठका बाँकी रहेका विवादास्पद भावनाहरूलाई जगाउँदछ: प्रशंसा र भय।
यद्यपि ती वृद्धले आफ्नो दृष्टि गुमाएका छन् र पुस्तकालयको स्वामित्वमा छैन, तिनका ठाउँहरू ईन्च इन्चले चिनिन्छ, र उनको भनाइलाई अरू भिक्षुहरूले बुझेका र भविष्यसूचक ठानिन्छन्। यस विरोधीको सिर्जनाको लागि, लेखक प्रख्यात लेखक जर्ज लुइस बोर्जेजबाट प्रेरित थिए।
जब यो आउँछ ऐतिहासिक कथा, धेरै वास्तविक पात्रहरू प्लटमा फेला पार्न सकिन्छ, जो प्रायः तिनीहरू धार्मिक क्षेत्रका हुन्। ती मध्येका हुन्: बर्ट्रान्डो डेल पोगेट्टो, उबर्टिनो दा क्यासल, Bernardo Gui र Adelmo da Otranto।
उपन्यासको सफलता पछि छ वर्ष निर्देशक जीन-जैक अन्नाउडले यो ठूलो पर्दामा ल्याए। समलिom्गी चलचित्र मान्यता प्राप्त अभिनेताहरू सीन कन्न्नेरीद्वारा संचालित गरिएको थियो - जस्तै फायर गिलर्मो - र क्रिश्चियन स्लेटर - एड्सो जस्तै।
किताब जस्तै, फिल्म निर्माणले जनताबाट उत्कृष्ट स्वीकृति प्राप्त गर्‍यो; थप रूपमा, यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा १ 17 पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो। यद्यपि यसको प्रीमियर पछि आलोचकहरू र इटालियन मिडियाले यस फिल्मको बिरुद्द कडा बयान गरे किनभने उनीहरूले सोचे कि यो प्रशंसित पुस्तकसम्म छैन।
२०१ In मा, आठ एपिसोडको श्रृंखला प्रीमियर गरिएको थियो जसले सफलताको आनन्द उठायो उपन्यास तुलना र चलचित्र। यो इटालियन-जर्मन उत्पादन थियो जुन जियाकोमो बत्तीआटोले बनाएको हो; यो १ 130० भन्दा बढी देशहरूमा वितरण गरिएको थियो र इटालीमा ठूलो कुख्यातता हासिल गर्यो।
लेखकमा कहानी आधारित छ डो पम्प्सन डे मेलकको पाण्डुलिपि, एक पुस्तक उसले १ 1968 .XNUMX मा प्राप्त गर्यो। यो पाण्डुलिपि मेलक (अस्ट्रिया) को गुम्बामा भेटियो र यसको निर्माताले यसलाई “अबे भलेट” को रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यसमा समयका केही ऐतिहासिक प्रमाणहरू सामेल छन्। थप रूपमा, जसले यो लेख्यो त्यसले यो मेलक एबेमा १ XNUMX औं शताब्दीको समयमा भेटिएको कागजातको सहि प्रतिलिपि हो भनेर दाबी गर्‍यो।
लेखकको बारेमा, उम्बर्टो इको
म Tuesday्गलबार,5जनवरी, १ 1932 XNUMX२, इटालियन शहर एलेसेन्ड्रियाको जन्म भयो उम्बर्टो इको Bisio। उनी जिउलिओ इको - लेखापाल - र जियोभन्ना बिसिओको छोरो हो। दोस्रो विश्व युद्ध शुरू गरेपछि, उनको बुबालाई सेनामा सेवा गर्न बोलाइएको थियो। यो कारणले, आमा बच्चासँगै पिडमन्ट शहरमा बसाई।
अध्ययन र पहिलो काम अनुभव
सन् १ 1954 .XNUMX मा उनले टुरिन युनिभर्सिटीबाट दर्शन र पत्रमा डक्टरेट गरे। स्नातक पछि, म काम गर्छु RAI एक सांस्कृतिक सम्पादकको रूपमा र विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको रूपमा आफ्नो क्यारियर सुरु गर्नुभयो ट्यूरिन, फ्लोरेन्स र मिलानमा अध्ययन घरहरूमा। त्यतिखेर, उनले ग्रुपो from important बाट महत्वपूर्ण कलाकारहरू भेटे, मानिस जसले पछि लेखकको रूपमा उनको क्यारियरलाई प्रभाव पार्दछ।
१ 1966 .XNUMX सम्म उनले फ्लोरेन्स शहरमा भिजुअल कम्युनिकेसनको अध्यक्ष नियुक्त गरे। तीन वर्ष पछि, उनी अर्धविज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय संघको संस्थापक थिए। 30० बर्ष भन्दा बढी समय, उनले बोलोग्ना विश्वविद्यालयमा सेमिटिक्स वर्गको शिक्षण गरे। त्यो स्थानमा उनले उच्च स्तरीय संकायको लागि उच्च मानवीय अध्ययन को स्कूल स्थापना गरे।
1966 मा, लेखक बच्चाहरु को लागी सचित्र कथाहरु को एक जोडी को साथ शुरू भयो: बम र जनरल y तीन cosmonauts। चौध वर्ष पछि उसले प्रकाशित गर्‍यो उपन्यासले उनलाई स्टारडममा पुर्‍यायो: गुलाबको नाम (1980)। थप रूपमा, लेखकले छ वटा कार्यहरू लेखे, जसमध्ये निम्न खण्डहरू: फुकल्टको पेन्डुलम (1988) र बाउडोलिनो रीना लोआना (2000)।
इको उनी रिहर्सलमा चकित भए, एक विधा जसमा उनले 50० बर्ष भन्दा बढी works० कार्यहरु प्रस्तुत गरे। यी पदहरू मध्ये, निम्नलिखित बाहिर खडा: खुला काम (1962), Apocalyptic र एकीकृत (1964), Liebana को धन्यबाद (1973), सामान्य सेमोटिकमा उपचार (1975), दोस्रो दैनिक न्यूनतम (1992) र दुश्मन निर्माण गर्नुहोस् (2013)।
उम्बर्टो इकोले लामो समयसम्म प्या pan्क्रियाटिक क्यान्सर बिरूद्ध लडाई लियो। रोगबाट धेरै प्रभावित, म Tuesday्गलबार, फेब्रुअरी १,, २०१ 19 मिलानको शहरमा मरे.
रानी लोआनाको रहस्यमय ज्वाला(2004)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » गुलाबको नाम
जीसस भालेरो। छायाको प्रतिध्वनि को लेखक संग साक्षात्कार
हेर्नको लागि पठनहरू वा पढ्न श्रृंखला। एक चयन